Umthetho Wezimo Ezingalindelekile kanye ne-coronavirus (COVID-19) – isihloko sosizo
Qaphela: Kusukela ngo-May 31, 2022, sibuyekeza isivikelo se-COVID-19 ngaphansi komthetho wethu wezimo ezingalindelekile:
• Ngokuqondene nokubhukha okwenziwe ngo-May 31, 2022 noma ngemva kwalokho, izimo ezingezansi ezihlobene ne-COVID-19 ngeke zisahlanganiswa (ngaphandle kokubhukha kwasekhaya e-South Korea). Kunalokho, inqubomgomo yokukhansela yoMbungazi izosebenza njengokuvamile.
• Ngokuqondene nokubhukha okwenziwe ngaphambi kuka-May 31, 2022, izimo ezingezansi ezihlobene ne-COVID-19 zizoqhubeka zihlanganisiwe.
Kuvuselelwe ngomhla ka- October 1, 2020
Ngo-March 11, i-World Health Organization (WHO) yamemezela ukuqubuka kwe-coronavirus, eyaziwa ngokuthi yi-COVID-19, njengobhubhane lomhlaba wonke. Kusukela ngaleso sikhathi, ukuqubuka sekusabalele ngokushesha nohulumeni emhlabeni wonke bethatha izinyathelo ezisheshayo ukudambisa ukubhebhetheka kwe-COVID-19.
Esikwenzayo, sihlinzeka ngesivikelo esilandelayo se-COVID-19 ngaphansi komthetho wethu wezimo ezingalindelekile ukusiza ukuvikela umphakathi wethu nokunikeza ukuthula kwengqondo. Sicela ubeke iso kuleli khasi ukuze uthole ezakamuva maqondana nesivikelo.
Icebiso: Uma uyisivakashi, ungathola izindlela zokukhansela nokubuyiselwa kwemali ngokuthi uye ekhasini elithi Uhambo bese ukhetha uhambo lwakho—thola ukuthi kanjani. Uma unguMbungazi, uzothola imininingwane kudeshibhodi yakho yokubungaza.
Ukubhukhwa kwezindawo zokuhlala Nokokuzithokozisa kwe-Airbnb okwenziwe ngo-March 14, 2020 noma ngaphambi kwalokho, okunosuku lokungena oluphakathi kwezinsuku ezingu-45 ezilandelayo ukusuka namuhla, kuhlanganisiwe kunqubomgomo futhi kungakhanseleka ngaphambi kokungena. Izivakashi ezikhanselayo zizoba nezindlela zokukhansela nezokubuyiselwa imali futhi Ababungazi bangakhansela ngaphandle kwenkokhiso noma ukuphazamiseka kwesteyithasi sabo sokuba Ababungazi Abavelele. Kuphakathi kokuthi i-Airbnb izobuyisa imali, noma ikhiphe isikweletu sohambo esihlanganisa wonke amanani esevisi okukhansela okuvikelwe. Ukuze ukhansele ngaphansi kwenqubomgomo, kuzodingeka ukuthi ufakazele amaqiniso, kanye/noma uhlinzeke ngamadokhumenti afakazela isimo sakho esingalindelekile.
Inqubomgomo yokukhansela yoMbungazi izosebenza njengokuvamile ekubhukheni okwenziwe ngemva kuka-March 14, 2020, ngaphandle kwalapho isivakashi noma uMbungazi egula ephethwe yi-COVID-19.
Ukukhansela kuzosingathwa ngokuvumelana nezimo ezingalindelekile ezikhona ngesikhathi sokuthunyelwa kwako, futhi ukubhukha obesekukhanseliwe kakade ngeke kucatshangelwe kabusha.
Kusebenza izinqubomgomo ezihlukile ekubhukheni kwasekhaya e-mainland China kanye nasekubhukheni kwe-Luxe noma kwe-Luxury Retreats.
Ukubhukha okwenziwe ngomhla ka-March 14, 2020 noma ngaphambi kwawo
Ukubhukha kokuhlala noKokuzithokozisa kwe-Airbnb okwenziwe ngomhla ka-March 14, 2020 noma ngaphambi kwawo, okunosuku lokungena oluphakathi kwezinsuku ezingu-45 ezilandelayo ukusuka namuhla, kungakhanseleka ngaphambi kokungena. Lokhu kusho ukuthi izivakashi ezikhansela ngaphansi kwenqubomgomo zizobuyiselwa imali ephelele noma ikhredithi yokuvakasha yenani ezilikhokhile (lapho kutholakala khona ikhredithi yokuvakasha), aBabungazi bangakhansela ngaphansi kwenqubomgomo ngaphandle kwezindleko noma ukuphazamiseka kwesteyithasi sabo sokuba Ababungazi Abavelele, futhi i-Airbnb izobabuyisela imali, noma ibanike ikhredithi yokuvakasha yenani elihlanganisa zonke izindleko zesevisi.
Ukubhukha kokuhlala noKokuzithokozisa kwe-Airbnb okwenziwe ngomhla ka-March 14, 2020 noma ngaphambi kwawo, okunosuku lokungena lwezinsuku ezingaphezu kuka-45 kusukela namhlanje, akuhlanganisiwe okwamanje ezimweni ezingalindelekile ezihlobene ne-COVID-19. Inqubomgomo yokukhansela yoMbungazi izosebenza njengokuvamile.
Ekuhlaleni kanye noKokuzithokozisa kwe-Airbnb okwenziwe ngemva kuka-March 14, 2020, inqubomgomo yokukhansela yoMbungazi izosebenza njengokuvamile futhi lokhu kubhukha ngeke kuhlanganiswe ngaphansi komthetho wethu wezimo ezingalindelekile, ngaphandle kwalapho isivakashi noma uMbungazi egula ephethwe yi-COVID-19. Izimo ezihlobene ne-COVID-19 ezingahlanganisiwe zibandakanya: ukuphazamiseka kwezinto zokuhamba nokukhansela; iziqondiso nemingcele yokuvakasha; iziqondiso zezempilo nokuhlukaniswa nabantu; izinguquko emthethweni osebenzayo; nokunye okuyimiyalo kahulumeni—efana nemiyalo yokuphuma endaweni, ukuvalwa kwemingcele, ukwenqatshelwa kokuqasha isikhathi esifushane, kanye nezimfuneko zokuhlala lapho ukhona.
Umthetho wethu wezimo ezingalindelekile uhloselwe ukuvikela izivakashi naBabungazi ezimweni ezingalindelekile ezivela ngemva kokubhukha. Ngemva kokumenyezelwa kwe-COVID-19 yi-World Health Organization njengobhubhane lomhlaba wonke, umthetho wezimo ezingalindelekile ngeke usasebenza ngoba i-COVID-19 kanye nemiphumela yayo akusekona okungalindelekile noma okuzumayo. Sicela ukhumbule ukuhlola ngokucophelela inqubomgomo yokukhansela yoMbungazi lapho ubhukha futhi ucabangele ukukhetha okuvumela ukuvumelana nezimo.
Uma uyisivakashi, ungathola izindlela zokukhansela nokubuyiselwa imali ngokuya ekhasini elithi Uhambo bese ukhetha uhambo lwakho—thola ukuthi kanjani. Uma unguMbungazi, uzothola imininingwane kudeshibhodi yakho yokubungaza.
Okwakamuva nezinsiza ze-coronavirus
Sikhethe izihloko ezizosiza umphakathi wethu phakathi nalesi sikhathi eSikhungweni Solwazi. Ungathola imininingwane yakamuva ngesikwenzile nge-COVID-19, kusuka ezilungisweni zenqubomgomo kuye ezinsizeni zaBabungazi nezivakashi.
Sicela wonke amalungu omphakathi akhumbule ukuhlonipha, ukungabandlululi, kanye nomthetho wokungabandlululi lapho esebenzelana namanye amalungu omphakathi wethu.
Funda mayelana nenqubomgomo yezimo ezingalindelekile phakathi nobhubhane lwe-COVID-19.
Lapho uzobuyiselwa imali yakho
Nakuba kukhishwa cishe masinyane, ukubuyiselwa imali okuningana kufika phakathi nezinsuku ezingu-10, kodwa kwezinye izindlela zokukhokha nez…
Ongakukhetha ekukhanseleni ngenxa ye-COVID-19
Ukuze uthole ukuthi yikuphi ongakhetha kukho manje, iya kokhansela ukubhukha kwakho bese ukhetha okuthi izinhlelo zohambo lwakho sezishintsh…